» २०७६ मंसिर ८ गतेदेखि १४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
८ मंसिर २०७६, आईतवार १०:५५
मेष : आफन्त र मित्रवर्गको सहयोग पाइने समय नै छ । सकारात्मक सोच बढ्ने छ। तपाईंको चिन्तन र उपायले काम गर्नसक्छ । आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन । मानसम्मानमा बृद्धि हुनेछ । बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन ।
कर्कट : एकोहोरो र जिद्दीपना त्याग्नु राम्रो हुनेछ । छरछिमेकमा भएका असमझदारीको सुलह हुनेछ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्र एवं मित्रवर्गको सहयोग प्राप्त हुनेछ । बन्दव्यापारमा सोचेजस्तै लाभ लिन सकिने छ । घरपरिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ ।
सिह : सामान्यतया यो साता मध्यम छ । अध्यनमा बाधा आउला। ब्यापारमा केही नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ।पारिवारिक असमझदारी बढ्न सक्छ ।यद्यपि बुधबारदेखि राम्रो समय आउने छ । पुराना कमजोरी सच्याउदै अगाडि बढ्ने अवसर मिल्ने छ ।
कन्या : शत्रुपक्ष कमजोर हुने छन । समाजिक क्षेत्रमा लगानी हुन सक्छ । घरपरिवारबाट साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । कतिपय राम्रा अवसरहरू प्राप्तहुने छन, स्वास्थ्य अनुकूल हुनेछ । मित्र, परिवार र सहयोगीले साथ दिनेछन ।
तुला : आर्थिक रूपमा सबल हुनुहुनेछ, कारोबारमा फाइदा हुने छ । विपरीतलिङ्गीबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पछाडि कुरा काट्ने शत्रु आफैं पराजित हुनेछन ।
वृश्चिक : साताको सुरूका दिनहरू प्रतिकुल छ्न् । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । सानातिना घरायसी कामहरूमा समय व्यतीत हुनेछ । साताको मध्यबाट राम्रो छ । यात्रा सहयात्रा सफल हुन्छ ।
मकर : वस्त्र, अलङ्कार आदि खरिद गर्ने योग छ । कुनै नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ । विशिष्ट व्यक्तित्वसँग भेटघाट र मित्रता हुनेछ ।घुमघाम र भेटघाटको समय छ, मेवामिष्ठान्न र परिकार मिल्नेछ ।
कुम्भ : परोपकारी विचार आउन सक्छन्, त्यस्तै प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।खानपिनमा रूचि बढ्ने छ। शुभ समाचार सुन्न पाइने छ। मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त मिल्ने छ ।
मीन : राजनैतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न लगानी गर्ने समय आएको छ । बन्धुबान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिनसकिने छ । वैदेशिक व्यापार, कृषिव्यवसाय र नोकरीमा प्रगति होला ।
प्रस्तुतकर्ता: ज्यो. चक्रपाणी डुम्रे (शास्त्री)
सम्पर्क न. ९८५७०३५४६१